Mitentina 111 tapitrisa dolara ny ankivy an'i Ben & Jerry an'i Israely
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » Mitentina 111 tapitrisa dolara ny ankivy an'i Ben & Jerry an'i Israely
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • culinary • Kolontsaina • fampiasam-bola • Israel Vaovao Vaovao • Vaovao • People • tompon'andraikitra • fiantsenana • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Mitentina 111 tapitrisa dolara ny ankivy an'i Ben & Jerry an'i Israely.
Ny tahirim-bolan'ny fisotroan-drononon'i New York, izay mampiasa vola maherin'ny 800 tapitrisa dolara manerana an'i Israely, dia efa nampitandrina ny orinasa tamin'ny volana Jolay fa hanimba ny fampiasam-bolany manokana ao Israely ny fanaovana ankivy.
Miatrika fihemorana ara-bola noho ny fanaovana ankivy an'i Israely ilay goavan'ny gilasy any Vermont, Ben & Jerry.
New York State Common Retirement Fund dia mandoa vola amin'ny tombom-barotra amin'ny orinasa Ben & Jerry.
Ny fanaovana ankivy, hoy ilay vondrona, dia manitsakitsaka ny politikan'izy ireo manokana manohitra ny hetsika BDS (fandroahana, fandroahana, ary sazy).
Ny New York State Common Retirement Fund dia nanambara fa handroaka ny fitehirizam-bola Ben & JerryNy orinasan'ny ray aman-drenin'ny Unilever PLS, momba ny firotsahan'ny orinasa amin'ny hetsika BDS manohitra ny Isiraely.
"Taorian'ny fandinihana lalina," hoy ny famatsiam-bola dia hanaisotra ny fitehirizam-bola ao amin'ny Unilever PLS. “Ny famerenantsika ny asan'ny orinasa, sy ny sampany Ben & Jerry's, nahita fa mirotsaka amin'ny hetsika BDS eo ambanin'ny politikan'ny tahirim-bola fisotroan-dronononay izy ireo, ”hoy i Tom DiNapoli, mpitantana ny tahirim-bola fisotroan-dronono, momba ny fanapahan-keviny hanapaka ny fifandraisana amin'ilay goavam-be gilasy any Vermont liberaly.
Ny ankivy, hoy ilay vondrona, dia manitsakitsaka ny politikan'izy ireo manokana manohitra ny hetsika BDS (fandroahana, fandroahana, ary sazy).
Ny tahirim-bola be fisotroan-dronono any New York, izay mampiasa vola mihoatra ny 800 tapitrisa dolara manerana an'i Israely, dia efa nampitandrina ny orinasa tamin'ny volana Jolay fa hanimba ny fampiasam-bolany manokana ny fanaovana ankivy. Isiraely.
Ny ankivy, izay nahita Ben & Jerry Ny fandavana ny hivarotra gilasy any amin'ny 'Faritany Palestiniana voabodo' ao amin'ny Morontsiraka Andrefana sy Jerosalema Atsinanana, dia niatrika fanoherana mahery vaika avy amin'ireo mpandinika sy mpanao lalàna amerikana maro, ary koa ireo manampahefana israeliana maro.
Niteraka fanesoana ihany koa ny ankivy Ben & JerryNy mpiara-manorina an'i Ben Cohen dia nifanehatra tamin'ny fiandohan'ity volana ity momba ny safidy amin'ny faritra hanaovana ankivy, miaraka amin'ny orinasa mandray fepetra manohitra. Isiraely, fa tsy fanjakana toa an'i Georgia, izay nambaran'ireo mpiara-manorina fa manana olana lehibe momba ny zon'ny mpifidy natosiky ny mpanao lalàna Repoblikana. Rehefa nanontaniana ny antony tsy nanaovan'ilay orinasa ankivy i Georgia, dia namaly i Cohen hoe: “Tsy fantatro.”
"Amin'izany fisainana izany dia tsy tokony hivarotra gilasy na aiza na aiza isika," hoy izy. Ireo mpiara-manorina ny orinasa dia nilaza ny tenany ho “Jiosy miavonavona” izay tsy manaiky tsotra izao ny politikan'i Israely.
Niaro ny ankivy ny Unilever tamin'ny volana Aogositra tamin'ny taratasy iray ho an'ny tahirim-bola fisotroan-dronono any New York, miaraka amin'ny tale jeneralin'i Alan Jope nilaza fa mampiasa an'arivony ao Israely ny orinasa ary manana vola an-tapitrisany any, saingy tsy mitsabaka amin'ny hetsika ataon'ny birao “tsy miankina”.